CASE တည်ဆောက်ရေး စက်ယန္တရား (MM) လုပ်ငန်းခွင် စောင့်ကြည့်ခြင်း၏ မေးခွန်းများ
ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာသည် တနေရာမှ တနေရာသို့ ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မှုအား သတင်းအချက်အလက်များ ပေါင်းစပ်ပါဝင်စေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဟတ်ဝဲလ်ယူနစ်အတွင်း စက်၏သတင်းအချက်အလက်များ စုစည်းထားပြီး လေလိုင်းမှတဆင့် ထုတ်လွှင့်သည့်အတွက် နေရာ အနေအထားဝေးကွာသော်လည်း ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်သည်။
စောင့်ကြည့်နည်းပညာသည် US နှင့် CANADA နိုင်ငံများတွင် သုံးနိုင်ပါသလား
CASE စောင့်ကြည့်နည်းပညာတွင် GSM ဆယ်လူလာ ဆက်သွယ်မှုပုံစံမျိုး အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်သည့် မြောက်အမေရိကရှိ AT&T, T-Mobile နှင့် Rogers ကြိုးမဲ့စနစ်တို့ကဲ့သို့ ထိပ်တန်း ဆယ်လူလာ ထောက်ပံ့ပေးသော ကုမ္ပဏီများနှင့် စာချုပ် ချုပ်ဆိုမှုများရှိသည်။ လိုင်းမကောင်းမှုများဖြစ်ပေါ်ပါက အချက်အလက်များကို စက်မှ မှတ်သားပေးပြီး၊ လိုင်းကောင်းချိန်တွင် ပို့လွှတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဂြိုလ်ထုဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ထပ်မံတိုးတက် ထောက်ပြချက်များရရှိလာနိုင်ပြီး ငွေကြေးအားဖြင့်လည်း အရန်သင့် ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။
မြောက်အရိကမဟုတ်ဘဲ အခြားတိုင်းပြည်များတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသလား
ယနေ့ခေတ် CASE ယန္တရားများတွင် GSM ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များတပ်ဆင်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။ GSM ကွန်ယက် အသုံးမပြုသော တိုင်းပြည်နိုင်ငံများတွင် ၎င်းနည်းပညာကို အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
ယင်းနည်းပညာအား လက်ရှိစက်တွင်လဲလှယ်တပ်ဆင်ခြင်း၊ စက်အဟောင်းများတွင်တပ်ဆင်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား? ယှဉ်ပြိုင်ဖက်စက်များ တွဲဖက်အသုံးပြုရသောပစ္စည်းများတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင် ပါသလား?
့Yes, အလုံးစုံပါဝင်သော စုစည်းပစ္စည်းများ ၀ယ်၍ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အချိန်ကာလအားဖြင့် ကြာနေသော စက်များနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းများ ပြုလုပ်လိုပါက ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား ?
စောင့်ကြည့်နည်းပညာဖြင့် မိမိစက်မှ အချက်အလက်များကို မည်သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သနည်း။
သင့်စက်၏ အချက်အလက်များကို ကွန်ယက်များမှတဆင့် PC (or) Mac (or) Tablet များမှ တိုက်ရိုက်သိရှိနိုင်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် CASE ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများမှတဆင့် စောင့်ကြည့်စေပြီး၊ ၎င်းတို့တင်ပြချက်များမှလည်း သိရှိနိုင်သည်။
သင်တန်းသည် မဖြစ်မနေတတ်ရမည်ဟု မဆိုလိုပေ။ သို့ရာတွင် အွန်လိုင်းသင်ယူရေးများသာမက Youtube လိုင်းများမှ တဆင့် စမ်းသပ်သင်ယူမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၎င်းနည်းပညာများ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ၀ယ်ယူသူများအပေါ်မည်ကဲ့သို့ အထောက်အပံ့ပေးသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့ CASE ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများသည် customer များအား ကူညီရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။ ၀ယ်ယူသူများ အနေဖြင့် အကူအညီလိုအပ်ပါက 866-54CASE6 (866-542-2736) သို့ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
စောင့်ကြည့်နည်းပညာဖြင့် စက်တစ်စီးတွင် အချက်အလက်မည်မျှသိရှိနိုင်သနည်း။
အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော နည်းပညာအသုံးပြု၍ သတ်မှတ်ချက်ပေါင်း ၄၀ ထိသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ယင်း အချက်အလက်များကို အနည်းဆုံး ၁၈ လထိသိမ်းဆည်းပေးထားနိုင်သည်။ အချက်အလက်များ၏ အရေအတွက် ပေါ်မူတည်၍ လက်ရှိ စက်ယန္တရားအချက်အလက်တို့ကို သိမ်းဆည်းပြီး၊ ရှာဖွေရန်လွယ်ကူစေသည်။ ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများမကောင်းသည့်အချိန်မျိုး၌ စက်၏အချက်အလက်များကို ရက်ပေါင်း ၃၀ကျော်ခန့် အထိ ထိန်းသိမ်းပေးထားနိုင်သည်။ စက်နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များအား ၁၈လထက်ကျော်လွန်၍ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်းနှင့် သီးခြားစီ ခွဲခြားမှတ်သားထားနိုင်ခြင်းတို့ကို Customer များအနေဖြင့် ဒေါင်းလုတ်ယူထားသင့်သည်။